The Best Electric Rubber oobhaka Kuba Ibhodi yakho - Jomo Technology Co., Ltd
The Best Electric Rubber oobhaka Ukuze Ibhodi yakho
Ngokuqhelekileyo awufuni ukuba uthwale zakho Rubber zombane imigama emide ngesandla, kwaye ubhaka ibhodi kungenza kube lula kakhulu ukuba wenze njalo. Nge ubhaka ibhodi, unako kwakhona uzive ukhululekile ukuba uthwale ibhodi yakho ukusebenza ngexesha kusasa lemvula yaye ndikhwele kulo ekhaya xa sele sunnier ngokuhlwa. Kukho iinketho eziliqela oobhaka Rubber yombane ukuba ziyakwazi ukuthwala 15 lb + longboard:
Burton Day uyaduka Pro 28L
Enye imfihlo ukuba siyikhumbule xa ukhangela ubhaka ibhodi kukuba oobhaka Snowboard elizisebenzela pretty kakuhle. Burton, a ezaziwayo-kakuhle izixhobo Snowboard lophawu, kukho iintlobo ngeentlobo oobhaka Snowboard ezisebenza kakuhle. Usuku uyaduka Pro 28L yenye umzekelo, afunisele ngokubanzi imibala, igumbi elaneleyo ezinye izixhobo ezifana oonogada kwisihlahla kunye kwamagqabi idolo, kunye nenkqubo ibhodi sokuthwala nkqo.
Koowheel Electric Longboard Bag siyindlela noko ahlukile kwaye ethandwa ukwenza zombini rhoqo kunye longboards zombane . Mna buqu sincoma kakhulu lo mntu kwakunye njengoko wamkelwa kakhulu ngabathengi abaninzi. Ngapha koko, ngenxa iKrismesi esiza, Koowheel Christmas 8600mAh (amandla kabini) replaceable Battery Limited Edition E-ibhodi ivuliwe kwintengiso. Nje iintsuku 20 kuphela. Akubuzwa sisipho ekhethekileyo abathengi abatsha nabadala.
Unakho ukuthenga Koowheel Longboard kunye ingxowa ngqo kwi- website esemthethweni.
Unity Rubber ubhaka
I Unity Rubber ubhaka na imveliso engenye mncane ukuba ezinkulu iingxowa Burton kunye Dakine. Ixhasa skateboards ukuya lbs-15, ngoko ke akukho enzelwe eziplangeni onzima kufana azivelele Bamboo GT. Noko ke, ngeeplanga ezifana indenza yiBhodi Dual + (2nd Gen ) bangenayo ngaphantsi nje umda 15 lb, i Unity Rubber ubhaka zizakusebenza kakuhle nje.
Kuba Bamboo GT okanye abanini Ikhabhoni GT (okanye, abanekratshi Bamboo GTX Abokuqala yokuqala), azivelele inikeza ubhaka sokuthengisa Rubber ukuluphatha iibhodi zabo. It has iimpawu eqhelekileyo njenge ingxowa ibhotile yamanzi (Noko ke, olwabo yambathisiwe), kunye iilogo ukucinga ngoko iimoto ndizokubona ukuba ebusuku.
Unga-odola i azivelele ubhaka ngqo babo web.
ixesha Post: Dec-06-2017